Welcome to Aayaha Nolosha » HA KA HOR IMAN DOOKHA WAALIDKAA EE TAAGEER.
HA KA HOR IMAN DOOKHA WAALIDKAA EE TAAGEER.
April 10, 2018 - Waxaa Qorey : Mohamed farah -
Jaceylku waa dareen xoog badan oo qalbiga qofka dhex gala, waana mid aan ku xirneyn da,….waa uu ku dhacaa dhalinyaro iyo waayeelba..waana dareen aan la xukumi karin oo iskii xor u ah.. Sidaa darteed waa mid haboon in aad tixgeliso Dookha waalidkii ku dhaley..ha ka hor imaan Jaceyl uu qaado waalidkaa Aabaha ama Hooyada ee ku Taageer si aad Duco uga kasbato.
Cabdi Xasan ayaa iiga Sheekeeyey Qiso uu ka Shalaynayo isaga oo nin Weyn ah, waxa uuna Ku bilaabey.. “Waxa aan daganeyn Xaafada Xamar-Jadiid ee Magaalada Muqdisho, Hooyadey Waxa ay Caruur ka dhashey aniga iyo Walaalkey Saalax oo aan Laba sano kaweynaa, waxaana ahayn Saaxiibo oo kale, Waxaan Dhiganeyney Dugsiga Hoose/ Dhaxe ee Maxamuud Xarbi.
Aabahay waxa uu dhintey aniga oo todoba Sano jira, Hooyadeyna nin Kale ma ay guursan. Markii ay istiri Wiilashaadii waa ay Koreen ayaa waxaa ay Biloowdey Haasaawe ay la yeelatey Nin Macalin ahaa oo Xaafada nala Deganaa….arintaasi waa ay nagubtey aniga iyo Walaalkey Saalax..waxaana ku tashaney in ninkan mar walba Xaafada imaanaya ee Habarta u Sheekeynaya aan ka Raacdeyno.
Maalin maalmaha Kamid ah ayaan guriga ugu imaaney.. Ninkii oo intey hooyo Gogol Fiican u dhigtey ay bun u dubtey…Gambar agtiisa ahna inta ay ku fariisatey ay Sheeko Fiican u Socoto. Islamarkiiba aniga iyo Saalax Xanaaq ayaan Jiq niri..dhiiga ayaa na Kacay..markaa ayaan Si Caro leh ugu yeeraney hooyadey…waxaana weydiiney waxa uu ninkani ka rabo guriga.. Hooyadey waxa ay garanweydey waxa ay ku Jawaabto, inta ay Candhuuftii ku margatey ayey Shib tiri.
Sidii kuma aanan Aamusin ee si Qaylo leh oo darisku ku soo kaceen ayaan iskumar ugu dhawaaqney in Ninkan uu na soo dhaafo mar danbana aanan ku arki karin guriganaga. Wadaadkii oo yaxyaxsan ayaa tartiib gurigii ka soo baxay, hooyana guriga ayey ku oradey maadama Naaga daris ah ay Soo baxeen iyada oo u aragta in ay Maanta Ceeboowdey.
Wixii maalintaa ka danbeeyey kuma aanan arag hooyo iyada oo nin la hadlaysa.. Sidaas ayaana markii danbe anaga oo rag waaweyn ah oo Xaasas iyo Caruurna leh, ay Hooyadey ku geeriyootey iyada oo Waayeel ah.
Ilaa maanta arintaasi waxay nagu noqotey Mid boog nagubaysa oo beerka nooga taala nagu ah….mar walba oo la soo qaado sida ay Waajibka u tahay in Waalidka laga duceysto..Boogtaasi waa na danqataa.
Waxaan isu aragnaa inaan nahay dad Hooyadood Habaar uga dhimatey, oo la God gashey. Hadda ayaan Xoolo u qalnaa u duceynaa..ilaahayna Cafis ka weydiisanaa..waan Ka shaleynaa gefkaas aan galney “, ayuu ku soo gabagabeeyey Sheekadii Cabdi Xasan oo ay Tiiraanyo ka Muuqato Wajigiisa.
Sidaa darteed Fariinta ay Sheekadan Xambaarsan tahay waxa ay tahay in qofnaba uusan ka Hor imaan Dookha Waalidkii Jacaylkooda iyo Guurkoodaba…waxaana Wanaagsan in lagu taageero..oo laga Caawiyo sidii Guurka ay Rabaan uu u noqon lahaa mid Farxad iyo Raaxo u yeesha…taas oo la hubo in lagu heli karo Duco Miisaan Culus..
W.Q.Mohamed Farah Duurgal.